Xildhibaan Dalxa oo sheegay Xabsiyada Muqdisho inay ku xiran yihiin dad Masaakiin ah oo awood loo sheegtay – STAR FM SOMALIA
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegay xabsiyada ku yaallo Magaalada Muqdisho, inay ka buuxaan dad badan oo masaakiin ah, kuwaasi oo aanan waxba galabsan.
Muddooyinkii dambe waxa uu sheegay in dalka ay ku soo badanayaan dad aanan awood badan laheyn in la iska xiro oo xabsiyada la geliyo, taasina ay tahay ku takrifalka awooda Dowladnimada.
Xildhibaan Dalxa, ayaa hadalkiisa intaasi ku daray Dadka la xiraayo ka sokoow inay jirto dad badan oo guryahoodii laga qaatay, kadibna lagu abaalmariyay xabsiga in la geliyo.
“Magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanayay waxa la yiraahdo dhul boobka oo aad iyo aad u noqotay wax joogta ah oo maxkamadaha gobalka Banaadir hadaad fiiriso aad arkayso wax kaliya la isku haysto tahay dhul, guri dhisan dad deganaa 60-kii illaa hadda waliba haysta Sabarloogoodii ay dad kale ku sheeganayaan, inta badanna dadka la dhibaateenayo ee loo awood sheeganayo waa dadka masaakiinta ah ee maciin laawayaasha ah, waxaad arkaysaa maxkamad degmo qof kasoo qaadanayo rafcaan halkii uu maxkamadda gobalka ama midda sare u aadi lahaa, hadane maxkamadaha kulligood aanay ka muuqan cadaalad ama garsoor” ayuu yiri xildhibaan Dalxa.
Xildhibaan Dalxa ayaa dhinaca kale sheegay in hadda Guddoomiyaha Gobalka Banaadir, Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka iyo cid walba oo arrimahaan quseyso looga baahan yahay in ay u istaagaan sidii ay wax badan uga qaban lahaayeen.
Inta badan waxaa dhacda dadka laga awooda badan yahay in lagu qabsado guryaha, kadibna ciidan loo soo wato, oo dadkaasi dusha laga saaro kiisas aysan gelin, kadibna Xabsiga la dhigo.